AH: စင်ကာပူရဲ့ Lemon Law (သို့) သံပရာသီး ဥပဒေ
စက်တင်ဘာလ စပြီ။ ယခုစက်တင်ဘာလ ၁ရက်နေ့မှာတော့ စင်ကာပူမှာတော့ Lemon Law လို့ခေါ်တဲ့ သံပရာသီး ဥပဒေ စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူလွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Lemon Law ဟာလည်း စင်ကာပူမှ အသက်ဝင်လာမှာပါ။ ဒီတော့ Lemon Law ဆိုတာဘာလဲပေါ့…. ကျွန်တော် သဘောပေါက်တာကတော့ သံပရာသီးဆိုတဲ့ Lemon ဟာ ချဉ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Lemon Law ဆိုတာ အချဉ်ဥပဒေ လို့ ဘာသာပြန်ရမလိုပါပဲ။ ၀ယ်သူနဲ့ ရောင်းသူကြားမှာ အရည်အသွေးမကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို “သံပရာသီး - အချဉ်” လို့ ဒီဥပဒေထဲမှာခေါ်ပါတယ်။ မနေ့က ကုမ္ပဏီက အိုင်တီဋ္ဌာနက တစ်ယောက်က ဒါလေးကို ပို့လိုက်လို့ ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ ပိုစ့်တင်မယ်လို့ စိတ်ကူးပြီးတော့ တင်ဖြစ်လိုက်တာပါ။
ဒီတော့ ဒီလိုမျိုး အချဉ် ပစ္စည်းတွေကို ၀ယ်မိတဲ့ စားသုံးသူတွေအတွက် ရောင်းချသူတွေရဲ့ အချဉ်ဖမ်းတဲ့ ဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ပေးမယ့် ဥပဒေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ၀ယ်သူက ၀ယ်လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းကိုယ့်လက်ထဲရောက်ခါစရှိသေးတယ် ပျက်သွားပြီ။ ဒီအခါမျိုးမှာ ဒီဥပဒေက ၆လအတွင်း ရောင်းချသူဟာ ၀ယ်ယူသူအတွက် အဆိုပါပစ္စည်းကို ပြင်ပေးရမယ်၊ ပြင်ပေးတဲ့ အချိန်ဟာ လက်ခံနိုင်တဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ ဖြစ်ရမယ်၊ မပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင် ပျက်သွားတဲ့ ပစ္စည်းကို အစားထိုးပေးရင်ပေး၊ မဟုတ်ရင် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်စေ၊ အပြည့်ဖြစ်စေ ငွေပြန်အမ်းရမယ် ဆိုတဲ့ အချဉ်ဖမ်းမှု့ကနေ ကာကွယ်ပေးမယ့် ဥပဒေပါ။ ဒါပေမယ့် ၀ယ်ယူသူကလည်း တမင်တကာ ပျက်သွားအောင်လုပ်တာ၊ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကို ၀ယ်ယူတဲ့ ပစ္စည်းကို ပြုပြင်တာ၊ ထပ်မံ ထပ်ဖြည့်တာ၊ ၀ယ်ပြီးသားကို မလိုချင်တော့လို့ မူလကျီ၊ မာလကျီလုပ်ပြီးတော့ ရောင်းသူဆီပြန်သွားတာ စတာတွေ လုပ်ခဲ့ရင်လည်း ဒီဥပဒေက ရောင်းသူတွေဖက်ကနေ ကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို အသေးစိတ် ဖတ်ချင်ရင်တော့ ဟော့ဒီမှာဒေါင်းပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ အကျုံးဝင်မယ့်ပစ္စည်းတွေကတော့ iPad, iPhone လိုမျိုး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကစလို့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကနေ ကားအထိ ပစ္စည်းတွေ တော်တော်များများပါပါတယ်။ အင်း ကောင်းပါတယ်။ အချဉ်တွေကို အချဉ်ဖမ်းမှု့ကနေ ကာကွယ်ဖို့ အချဉ် ဥပဒေကြီးကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်လေသတည်းပေါ့။ အဲ့.. တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့လေ… စင်ကာပူမှာ ဘာပစ္စည်းဝယ်ဝယ် T&C (Terms and Condition) ဆိုပြီး ၀ယ်သူတွေ သဘောကျစေလောက်တဲ့ စကားလုံးလေးတွေအပေါ်နားမှာ * ကြယ်ပွင့်လေးတွေ ကြယ်ပွင့်လေးတွေ ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကြယ်ပွင့်လေးတွေ အကြောင်းကို ရောင်း/၀ယ် စာချုပ်ရဲ့ အောက်နားမှာ စားလုံး ပိစိလေးတွေနဲ့ ရေးထားတယ်။ အခု ဒီ အချဉ် ဥပဒေ ထွက်လာတော့ စာချုပ်တစ်ခုလုံး ကြယ်ပွင့်လေးတွေနဲ့ ပြည့်တော့မယ် ထင်ပ။ မနေ့က ကိုမောင်သန့်ရဲ့ ဘလောဂ်မှာ Comex 2012 အိုင်တီ ရှိုးပွဲအကြောင်း တင်ထားပါတယ်။ ဒီတော့ အဲ့ဒီမှာ ပစ္စည်းတွေဝယ်ရင်လည်း Jail Break တို့ root တို့မလုပ်ခင် ပျက်သွားရင် သွားပြီးတော့ claim လို့ရအောင် ဒီ ဥပဒေလေးကို ဖတ်သွားရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့လေ။
Posted by AH at 9/01/2012 08:55:00 AM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! September 1, 2012 at 2:49 PM
ဗဟုသုတလေးတွေ သိရလို့ ကျေးဇူးပါရှင်.....:)))
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) September 1, 2012 at 2:50 PM
မြန်မာပြည်မှာလည်း အဲဒီအချဉ်ဥပဒေရှိရင်ကောင်းမှာနော်း)
လရိပ်အိမ် September 1, 2012 at 5:57 PM